Dorgommii IAAF'n sadarkaa warqii kennameef kana morkii dhiiraan Li'ul Gabra Sillaasee injifateera - Oromia Broadcasting Network - OBN
Maaraatoonii Tiriinidaad atleetonni Itiyoophiyaa koornayaa lamaanuu riikardii bakkichaa fooyyessuun injifatan.
Yeroo 2ffaaf maaraatooniirratti kan hirmaate Li’ul, fageenyicha sa’aatii 2 daqiiqaa 4 fi sekondii 30’n xumure.
Bahreeynii Al Hasan Abbasii, Keeniyaa Matiwu kisooriyoon 2ffaa fi 3ffaan xumuran.
Atleetonni Itiyoophiyaa biroo Tsaggaayee kabbadaa fi Darribee Roobii wal duraa duubaan 4ffaa fi 9ffaa bahan.
Morkii dubaraan Asheetee Bakaree Diidoo Saa’aatii 2 daqiiqaa 21fi sekondii 14’n xumuruun injifatte.Sa’aatiin Asheeteen ittiin injifatte erga dorgommichi bara 1981 eegalamee dubartootaan sa’aatii fooyya’aa jalqabaati.
Keeniyaadhaa Liidiyaa cherimooyi 2ffaa yoo baatu, atleetonni Itiyoophiyaa Timbiit waldagabreel fi Abarruu Makuriyaa 3ffaafi 4ffaa, Damissee Fadisuu 10ffaa bahaniiru. Kaleessuma fiigicha daandiirraa Km 10 achuma Vaalensiyaatti dorgomameen, dubaraan atleetiin Itiyoophiyaa Tsiggee Hayilasillaaasee Abrahaa yoo injifattu, dhiiraan Siwiidinii Yoonaas Lendersan injifateera.
Total Visit : 201004
Total Hits : 53972